I-Crm Amanani -
Thola konke Okudingekayo Kwethimba Lakho Ukuze Ukwenze Okuningi
Ku- intengo engabizi (Gcina enye i-25% ngonyaka!). Ngokukhululeka kwe-Excel.
Isivivinyo samahhala sezinsuku ezingu-14
Bonisa intengo ku:
Ngomsebenzisi / inyanga ikhokhiswa njalo ngonyaka
$ 16 inyanga nenyanga
Zama izinsuku ezingu-14 mahhala
UkuPhatha nokuPhatha koLwazi
Imininingwane yeqembu / ingxenye
Yenza ngokwezifiso amakholomu
Lawula ukuthi ubani ongabona ukuthi yiziphi izinkambu
Londoloza amahora amaningana ngesonto!
I-2 - indlela ye-imeyili yokuvumelanisa
Ukulandelela kwe-imeyili okungenamkhawulo, ngisho naku-Gmail
Khumbuza uma kungekho mpendulo
Ngenisa & Thumela
Thatha umzila kusuka kuwebhusayithi
Hlanganisa ne-100 yezinhlelo zokusebenza usebenzisa i-Zappier
$ 21 inyanga nenyanga
Ama-Dashboard kanye nemibiko ejwayelekile ye-20
Imibiko yangokwezifiso, ngisho nasemasimini okwezifiso
Izinhlobo ezahlukene zamashadi
I-Heirarchy esekelwe ukulawula idatha yokufinyelela
$ 32 inyanga nenyanga
Yenza ngokwezifiso kunoma iyiphi imboni
Landelela izinto ezifana nezinkokhelo, izinkundla, izindawo, njll besebenzisa amatafula wendabuko
Izinhlelo zokusebenza ngokwezifiso
Dala izinhlelo zokusebenza ezijwayelekile njengemenenja yezindleko, ukuphathwa kwezemfundo njll
Ukubika kumatafula / izinhlelo zokusebenza zangokwezifiso
I-Quotation & Inventory
Dala ama-Quotes afunayo asebenzayo kokuchofoza kwe-1
Hlela izinqubo zakho (Ukuza maduze ..)
Izaziso ezihleliwe / izenzo
Izinguquko ezinkulu / izenzo
Dala i-logic yangokwezifiso (ngaphandle kwekhodi!) Ukuze ulungise noma iyiphi inqubo yebhizinisi
Amakhoyili / izaziso ezizenzakalelayo
Yakha ngokuzenzakalelayo imisebenzi / amanye amarekhodi
Imithetho esekelwe ukulawula idatha yokufinyelela
* Imali ayifakiwe.
Isivivinyo samahhala se-14 sisebenza kanjani?
Kulula kakhulu. Ngokushesha nje uma udala i-akhawunti yakho ye-CompanyHub yesilingo ungangeza abasebenzisi abaningi ngendlela ongathanda ngayo. Uzokwazi ukufinyelela kuzo zonke izici ze-CompanyHub. Ngemuva kwezinsuku ze-15, ungakhetha ukungena kuhlelo olulodwa lwezinkokhelo zenyanga noma ngonyaka.
Ngingahlola i-CompanyHub nabalingani bami ngesikhathi sovivinyo?
Ungamema osebenza nabo ukuthi bajoyine i-akhawunti yakho yecala le-CompanyHub. Ngempela sincoma ngokuqinile ukuthi udale i-akhawunti yakho yomsebenzisi amaningi njengoba kuyindlela engcono kakhulu yokwenza ucwaningo lwakho lukhulu kakhulu. Vele uchofoze inkinobho yokumema Abamema ukumema ithimba lakho.
Idatha yami ivikelekile kanjani?
Ukuphepha kwedatha yakho kungukukhathazeka kwethu okuyinhloko, yingakho sisebenzisa amaseva amaningi avikelwe ukuthi amasayithi asebhange asetshenziselwe ukugcina idatha yabo. Ungafunda kabanzi mayelana nakho ekhasini lethu leDatha nokuPhepha
Ngokusekelwe ezimfuno zami ngingakwazi ukuthuthukisa noma ukunciphisa noma kunini?
Yebo, ikhamera yelayisense yeNkampani ye-CompanyHub ihamba phambili ngokuqondile, ngokusekelwe ezimfuno zakho ongayithuthukisa noma ukuyidiliza noma kunini lapho ufisa.
Ingabe kukhona okunye esingakusiza ngakho?
Uma unemibuzo ehlobene neNkampaniHub noma yiziphi izici zayo, sicela ukhululeke ukufinyelela kithi ku- support@companyhub.com futhi ithimba lethu lizokujabulela ukuphendula yonke imibuzo yakho.
Hlela ukudayiswa kwakho namuhla
Faka inombolo yefoni evumelekile
Faka ikheli le-imeyili elivumelekile
Ukudala i-database ehlukile kuwe.
Lokhu kungathatha imizuzwana embalwa.
Ngokubhalisa, uyamukela yethu Imigomo Yesevisi futhi Inqubomgomo yobumfihlo
I-Copyright © 2017 CompanyHub. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Ungathanda ukuhlola manje?
Ungathanda ukushintshela English?
Khetha olunye ulimi